I-Tesla Powerwall 2 ibhetri, isizukulwana sesibini seebhetri zeTesla | Ukuhlaziywa okuluhlaza
I-Tesla Powerwall 2 Ibhetri
UTomàs Bigordà | | Ukonga umbane, Photovoltaic Solar Amandla, Amandla elanga ashushu, Umoya ovuselelekayo, Itekhnoloji entsha
La I-Tesla Powerwall 2 Isizukulwane sesibini sebhetri eyaziwayo yeTesla Powerwall. Iibhetri zeTesla zifezekise into ephantse ingenakwenzeka, thatha ithuba elikhulu lokuqhubela phambili ngale modeli intsha, ukuphucula kakhulu into esele ilungile kakhulu.
IPowerwall idityaniswa namandla elanga ukuze ibotshwe ubuninzi belanga kunye nokunciphisa ukuxhomekeka kwethu kwizibaso. Amandla elanga anokugcinwa emini kwaye asetyenziswe ebusuku ukuzenzela ngokwakho naliphi na ikhaya.
1 I-Tesla Powerwall 2, isisombululo esibanzi samandla ekhaya
2 Izibonelelo zebhetri yeTesla Powerwall 2
2.1 Fumana ngakumbi amandla elanga
2.2 Unokufumana ukuzimela kwigridi yamandla
2.3 Khusela amakhaya ngokuchasene nombane
2.4 I-Powerwall 2, elona bhetri lifikelelekayo
2.5 Jonga amandla akho naphi na
3 Umsebenzi weTesla Powerwall 2
3.1 Umzobo weTesla Powerwall 2 AC
3.2 Umzobo osebenzayo we-Tesla Powerwall 2 DC
3.3 I-Tesla Powerwall 2 kumanqanaba amathathu okufakwa
4 Ukucaciswa kweBhetri yeTesla Powerwall 2
5 Ibhetri iTesla eSpain
6 Ixabiso lebhetri yeTesla
7 Uphahla lwelanga
7.1 Iyafumaneka kungekudala
8 Iintsika ezintathu zotshintsho lwamandla
8.1 Umzekelo weTesla S
9 I-Tesla Battery kunye neRoyal Decree yokuSebenzisa ngokwakho
9.1 Ummiselo wasebukhosini 900/2015
I-Tesla Powerwall 2, isisombululo esibanzi samandla ekhaya
Ibhetri entsha ye-lithium-ion yekhaya kunye namashishini amancinci I-Tesla Powerwall 2 ubuphinda kabini umthamo wongaphambili. Inguqulelo yokuqala inomthamo wokugcina we-6,4 KW.
Ikwaquka enamandla Inverter yamandla ukuguqula umbane ogcinwe kwiDC (yangoku ngqo) kumandla aluncedo kwi-AC (ngokuTshintshanayo yangoku), ukuze ukwazi ukuyisebenzisa kuyo yonke indlu.
Ngokuphinda kabini umthamo wesizukulwana sokuqala, i-Tesla Powerwall 2 inamandla indlu enobukhulu obuphakathi (2 okanye amagumbi ama-3) usuku lonke. Sinokuqaqambisa ubungakanani bayo obumbeneyo, ukubanakho ukufaka iiyunithi ezininzi kunye nefayile ye- Inverter eyakhelweyo, ivumela ufakelo ukuba lwenziwe ngokulula naphi na.
Izibonelelo zebhetri yeTesla Powerwall 2
Fumana ngakumbi amandla elanga
Nokuba kumakhaya apho inkqubo yokuvelisa i-solar ye-photovoltaic sele ikhona, indawo enkulu yemveliso yalahleko xa ifakwa kwigridi okanye ayithathiwanga, xa usebenzisa imisebenzi yenaliti enguziro.
Nge-Powerwall 2 ungagcina yonke imveliso yesixokelelwano sakho selanga kwaye ufumane okuninzi kwiipaneli zelanga, ukuze ukwazi ukusebenzisa la mandla nawuphi na umzuzuNokuba ngumini okanye ubusuku.
Unokufumana ukuzimela kwigridi yamandla
Sebenzisa enye okanye ezimbini Iibhetri ze-lithium Tesla Powerwall 2 kwaye ngokudibanisa kunye namandla ombane we-photovoltaic unamandla ombane kwikhaya lakho ngaphandle kokuxhomekeka kwigridi yombane yoluntu, kunye nokonga konyaka oku kuthetha oku.
Khusela amakhaya ngokuchasene nombane
IPowerwall 2 ikhusela ikhaya lakho ekucinyweni kombane, kwaye ivumela ukukhanya nezixhobo zonke ukuba ziqhubeke nokusebenza ngaphandle kwengxaki, ide ibuyiselwe inkonzo.
I-Powerwall 2, elona bhetri lifikelelekayo
Ukongeza, ibhetri yeTesla Powerwall 2 inika elona xabiso liphezulu ngekWh yesikhundla kwimarike, ngaloo ndlela ihlengahlengisa iimfuno zamandla zemihla ngemihla zamakhaya amaninzi, kunye nokunciphisa iindleko zamandla ezingagungqiyo zombane oqhelekileyo.
IPowerwall yinkqubo ezenzekelayo esebenza ngokulula ukuyifaka kunye nokugcina simahla
Jonga amandla akho naphi na
Nge-app yeTesla ungayilawula ngokulula iPowerwall yakho, iiphaneli zelanga, okanye iModeli S okanye X yakho, nanini na, naphi na.
Umsebenzi weTesla Powerwall 2
Ibhetri yeTesla Powerwall 2 iya kuba neenguqulelo ezimbini:
I-Tesla Powerwall 2 AC, ene-inverter ifakiwe kunye nokudibanisa kwicala le-AC
I-Tesla Powerwall 2 DC, ngaphandle kwe-inverter kwaye iyahambelana neziguquli zetshaja zabavelisi abaphambili (Solaredge, SMA, Fronius, njl.
Umzobo weTesla Powerwall 2 AC
Kumfanekiso ongaphambili, ungabona umzobo wokusebenza kwesiqhelo i-tesla powerwall 2 ibhetri AC, ngokudibeneyo nenkqubo yokuvelisa i-photovoltaic, edityaniswa sisinxibelelanisi segridi yekhaya.
Imitha yamandla ifakwe entloko (iTesla Energy Gateway) yofakelo lombane lwasekhaya, olunoxanduva lokulinganisa ukuba ukusetyenziswa kwekhaya kungakanani funa amandla kwigridi okanye hayi. Ikwalinganisa amandla aphuma kwigridi, kwimeko apho amandla aveliswe yinkqubo ye-photovoltaic inkulu kunaleyo ifunwa likhaya ngelo xesha.
Ngale ndlela, i I-Powerwall 2 ibhetri igcina amandla ukuba kukho intsalela yemveliso ye-photovoltaic okanye inika amandla kwimeko apho iipaneli zingenakho ukubonelela ngawo onke amandla kunye namandla afunwa likhaya, njengeentsuku zenkungu okanye ebusuku.
Le ndlela yokusebenza izama ukusebenzisa ubuncinci bamandla afunekayo kwinethiwekhi, ukuvelisa ukonga okukhulu ixesha elininzi.
Umzobo osebenzayo we-Tesla Powerwall 2 DC
Imodeli IPowerwall 2 DC isebenza ngokuthe ngqo ngoku, iqhagamshelwe njengebhetri ekhokelayo yeklasikhi, kwitshaja ehambelana nayo okanye inverter yehybrid (SMA, Fronius, Solaredge, njl.).
Oluqwalaselo luya kuvumela ukusebenza kunye nebhetri yeTesla Powerwall kwiinkqubo ezizimeleyo, idityaniswe kwicala elikhoyo ngqo, kwaye hayi kuphela kufakelo oluqhagamshelwe kwigridi, ke ukhetho ikrwada kuyacatshangelwa. Oku kuthetha kwelinye icala ukuba ujongano lwe-wiring lwe-Powerwall AC luya kwahluka kuhlobo lweDC.
I-Tesla Powerwall 2 kumanqanaba amathathu okufakwa
I-Tesla Powerwall 2 ibhetri inokusebenza kufakelo lwezigaba ezithathu xa usebenza ngezigaba ezintathu ze-inverters eziguqulweyo, ezinje ngeFronius Symo Hybrid.
I-Powerwall 2 ayivelisi izigaba ezithathu zokuphuma ngoku, nangona kunjalo inokufakwa kwisigaba sesithathu ngokubeka ibhetri yeTesla kwisigaba esinye. Ibhetri inokufakwa nakwisigaba ngasinye ukubonelela ngokugcina amandla kuzo zontathu izigaba.
Ukucaciswa kweBhetri yeTesla Powerwall 2
Amandla: 13,5 kWh
Ubunzulu bokukhutshwa: 100%
Ukusebenza kakuhle: I-90% yomjikelo opheleleyo
Potencia: 7 kW incopho / 5 kW eqhubekayo
Ukuzisebenzisela amandla elanga
Ukutshaja ukutshintsha ngexesha lokusetyenziswa
Ukuzimela geqe kwigridi yombane
Ukwahluka: Ukuya kuthi ga kwiiyunithi ezili-9 zePowerwall zinokudityaniswa ngokuhambelana ukunikezela ngombane kumakhaya abo nabuphi na ubungakanani.
Ubukhulu: L x W x D: 1150mm x 755mm x 155mm
Ubunzima: 120 kg
Ukufakwa: Umgangatho okanye ukunyuka kodonga. Isembozo sayo esiqinileyo siyasikhusela emanzini okanye eluthulini kwaye siyivumela ukuba ifakwe ngaphakathi nangaphandle (IP67).
Isiqinisekiso: Izatifikethi ze-UL kunye ne-IEC. Iyahambelana nemigaqo yenethiwekhi yombane.
Khu seleko: ikhuselwe kuwo nawuphi na umngcipheko ekuchukumiseni Akukho zixhobo zikhululekileyo okanye iivente.
Ifriji engamanziInkqubo yolawulo lwamanzi ashushu ilawula ubushushu bangaphakathi kwiPowerwall ukuze yenze ngcono ukusebenza kwebhetri kuzo zonke iimeko zokusingqongileyo.
Ibhetri iTesla eSpain
La Ibhetri ye-tesla IPowerwall 2 iya kufumaneka eSpain ngo-2017, nangona umhla wokugqibela wokukhutshwa ungaziwa. Ukufakwa kufuneka kwenziwe ngokukodwa ngabafakeli abaqinisekisiweyo nguTesla, ukuqinisekisa ukusebenza ngokugqibeleleyo kunye nefayile ye Isiqinisekiso seminyaka emi-10 ngokuchasene nokungasebenzi kakuhle, kwimeko apho, ibhetri iya kutshintshwa ngokupheleleyo ngaphandle kwentlawulo.
Ixabiso lebhetri yeTesla
El Ixabiso lebhetri leTesla Powerwall 2 lelona xabiso lifikelelekayo nge-kWh yomthamo wentengiso ethile namhlanje, ukuba siyayithelekisa nexabiso labo sikhuphisana nabo ngokuthe ngqo, njenge-LG Chem RESU okanye i-Axitec AXIStorage (nangona ezi zinika ithuba lokuba zikwazi ukusetyenziswa zodwa iinkqubo ze-photovoltaic kunye nechaja elungileyo ye-inverter, enje ngeSMA Sunny Island okanye iVictron Multiplus okanye iQuattro). Ixabiso layo liya kuba ngeenxa zonke iya kuba malunga ne- € 6300, kunye ne- € 580 yofakelo.
Iindleko zenguqulo yokuqala zitshiphu kancinci, malunga ne-4.500 ye-euro. Masingakulibali ukuba yenzelwe ukuxhasa inkqubo yelanga ye-photovoltaic ukuze, ngelixa Iipaneli zelanga zivelisa, ikhaya lidla ngokuthe ngqo kubo okanye ukuba akukho nto isetyenzisiweyo, lo mbane uhlawula ibhetri yeTesla.
Xa kungasebenzi kuphela iipleyiti, indlu isebenzisa amandla agcinwe kwibhetri kwaye ukuba isadinga ngaphezulu, inokuqhagamshela kwinethiwekhi yombane ngokubanzi kwaye itye. Ngofakelo lwe-photovoltaic, iindleko zeprojekthi yokujika yiya kwi-8.000 okanye i-9.000 euro. Ezi ndleko ziya kucuthwa phakathi kweminyaka esixhenxe ukuya kwelishumi
Kodwa ukubheja kukaTesla akukho kwiibhetri kuphela, kodwa ekuveliseni iipleyiti ezizalisa ezi bhetri ngamandla. Isisombululo esihle sika-Elon Musk yayikukudala iipaneli zelanga eziguquguqukayo kuwo onke amaphahla osapho lwasekhaya, ngenkangeleko ebonakalayo kunye nexabiso eliphantsi kuneepleyiti eziqhelekileyo
Ngokumalunga nophahla lwelanga, zenziwe ngeethayile zeglasi ezineeseli ezihlanganisiweyo zelanga, ke zijongeka njengokuhle ("okanye ngcono" uElon Musk wathembisa kwinkcazo-ntetho yakhe) kunophahla oluqhelekileyo. Iithayile nganye ine ushicilelo olulodwa, ebanika phantse ukubonakala kobugcisa kwaye ke ngoko akukho uphahla lubini luya kufana ncam.
Ukongeza, i-Tesla iya kukhupha uyilo olwahlukeneyo ukuze ithelekise nayiphi na uyilo lwasekhaya. Le yintsebenziswano phakathi kweSolarCity kunye neTesla. Ngokuka-Elon Musk, "Sidale iTesla njengenkampani yemoto yombane, kodwa inene konke kukukhawulezisa utshintsho kwimithombo yamandla ehlaziyekayo."
Ngokusebenzisa iwebhusayithi yenkampani, bonke abo banqwenela ukwenza njalo banokulufumana olu phahla lwelanga. Phakathi kwamazwe ahlukeneyo akhethwe nguTesla ukubeka uphahla lwelanga ukuthengisa kubandakanya iSpain, apho kuya kufuneka kwenziwe idiphozithi ye-930 euro ukugcina le mveliso ayizukufika de kube li-2018.
Xa kuziwa kwiimodeli, iTesla ikhuphe ezimbini kuphela kwiinguqulelo zayo ezine zethayile yophahla lwelanga: iithayile zeglasi ezimnyama kunye neethayile zeglasi ebunjiweyo. Okwangoku, i-toscana, inguqulelo efana ne-tile yesiqhelo, kunye nesileyiti, iya kufika ngo-2018.
Iintsika ezintathu zotshintsho lwamandla
UMusk ucacisile ukuba zikhona izahlulo ezithathu ekuguqulweni kumandla elanga: ukuveliswa (ngohlobo lweepaneli zelanga), ukugcinwa (iibhetri) kunye nokuhamba (iimoto zombane). Injongo yakhe kukugubungela amanyathelo amathathu nenkampani yakhe iTesla.
Yiyo loo nto umbono wokujoyina iipaneli kunye neebhetri. Kude kube ngoku, nabani na ofuna ukubheja kumandla elanga kwaye enze ngaphandle kwigridi yombane kangangoko kunokwenzeka kufuneka athenge iipaneli kwinkampani yesibini, kunye neebhetri ezivela eTesla. Ukusukela ngoku ukuya phambili, amanyathelo aya zenza lula kakhulu, kuba iipaneli kunye neebhetri ziya kudibana. Ukuba kulonto sidibanisa iimoto zombane zeTesla kunye netshaja entsha, sine-3 egqibeleleyo kwi-1. Apha ngezantsi sinokubona iimodeli ezahlukeneyo zeemoto inkampani enazo, ukuze siphumeze ezi-3 kwezingu-1 ezixoxwe ngasentla.
Umzekelo weTesla S
El Umzekelo weTesla S It is a umnyango ezintlanu-saloon obutofotofo. Ithengisiwe ukusukela ngo-2012, inowona mgangatho uphakamileyo ngokokhuseleko kwaye iyimpumelelo ngokuthengisa ngaphakathi nangaphandle kwe-United States. Ifakwe i-60, 75, 90 okanye i-100 kWh ipakethe yebhetri, idlula iTesla Roadster ngokuzimela, ekwazi ukuhamba ngaphezulu kweekhilomitha ezingama-400 phakathi kweentlawulo. Injini isebenza kwi-asi engasemva kwaye iibhetri zilele phantsi. Iziphumo? Iziko elisezantsi lomxhuzulane ukuze isaloon ihambe umgama ofanayo ukusuka kwindlela njengemoto yezemidlalo. Umzekelo weTesla S Iyafumaneka ngeendlela ezimbini zokutsala: ngasemva kunye nemoto ezimbini drive-wheel yonke. Olu hlengahlengiso lokugqibela luxhobisa iimoto kwii-asi zombini, ukubekwa esweni kunye nokulawulwa kwamanani, okuvumela ukubambeka ngokugqibeleleyo kuyo nayiphi na imeko. Imodeli yeTesla S yandisa umthamo wepakethi yebhetri ngoyilo olusemoyeni lweendlela ezihambayo ezivumela ukuxhathisa okuncinci ekuhambeni komoya. Ngaphakathi, i-17-intshi ye-touchscreen iyabetha, i-angled ibhekise kumqhubi kwaye ibandakanya zombini iindlela zasemini nasebusuku zokubonakala ngaphandle kokuphazamiseka. Umphezulu ngamnye, upholstery kunye nomthungo ulinganisa ubuchule obubonakalayo kunye nokubonwa, kunye nokuhlonipha okusingqongileyo.
I-Tesla yandise uluhlu lwayo lweemodeli zombane nge Umzekelo weTesla X. Enye yezinto ezinomdla kakhulu kwimoto nakwimpawu zayo ezizayo: iingcango zangasemva ezinomtsalane apho eTesla bayibiza ngokuba 'yiminyango yamaphiko okhetshe'. Ngaphakathi ufumana indawo ethe chatha ukuya kutsho kwimiqolo emithathu yezihlalo zabakhweli abasixhenxe. Inebhetri engama-90 kWh kunye noluhlu olude lwezixhobo ezibandakanya ukupaka ezizimeleyo, izihlalo zesikhumba ezifudumeleyo, izibane ezibalekayo emini, ukubopha iziqhoboshi ngokuzenzekelayo, ukusonga umqolo wesithathu wezihlalo, ukufikelela okungenasitshixo kunye ne-automatic tailgate. Enye yezona zinto zinomdla weTesla Model X yikhemikhali okanye iqhosha lokukhusela ibhayoloji. U-Elon Musk uye waziqhenya ngokuqinisekisa ukuba i-Tesla Model X yeyona moto yokuqala emhlabeni ilungiselelwe uhlaselo lweekhemikhali okanye lwebhayoloji, sibulela isihluzi somoya esikhulu, ukuya kuthi ga kalishumi kunaso nasiphi na esinye isithuthi sanamhlanje. Oku kuyaphumeza ukuba kwiimeko eziqhelekileyo, kwigumbi leTesla Model X umgangatho womoya ufumaneka kwinqanaba lalo naliphi na igumbi lesibhedlele. Kwimowudi 'yohlaselo lwebhayoloji', eli cebo lokucoca ulwelo linokucoca ibacteria amaxesha angama-300 ngcono kunesiqhelo, i-allergen ephindwe ka-500, amaxesha angama-700 ungcoliseko lokusingqongileyo ukuya kumaxesha angama-800 okucoca ngakumbi iintsholongwane.
Emva kokulinda ixesha elide, iTesla Motors iveza Model Tesla 3, Iya kuba lilungu lesithathu loluhlu lwangoku lweTesla. Ibekwe njengeyona modeli yezoqoqosho (iModeli 3 iya kuqala kwi-35.000 yeedola e-United States), inika uluhlu olumalunga neekhilomitha ezingama-350, ukongeza ekubeni ikwazi ukwenza i-0 ukuya kwi-100 km / h kwimizuzwana engaphantsi kwemithandathu. Le modeli igqibezela 'iSicwangciso esiyiNtloko' sika-Elon Musk kunye noTesla, oqale ngeTesla Roadster, yaqhubela phambili neModeli S, yaza yakhula yabandakanya iModeli X. Imodeli yeTesla 3 sisixhobo esihambelanayo (sinobukhulu obuziimitha ezi-4,7 ubude kunye nezihlalo ezintlanu, i-100% yombane, yona ijonge ukukhuphisana sedans yemveli njenge-BMW 3 Series okanye i-Audi A4. Njengazo zonke iimodeli kuluhlu lweTesla, iya kuba yimoto ehambele phambili kwezobuchwephesha, kuba iya kuza isemgangathweni ngesixhobo sehardware esisebenza ngokuzimela kunye nokuqhuba ngokukhawuleza.
I-Tesla Battery kunye neRoyal Decree yokuSebenzisa ngokwakho
Ngelishwa, ISpain inengxaki yomthetho ombi kakhulu wokuSebenzisa ngokwakho kwihlabathi. Eyaziwayo "Irhafu yelanga"Ukususwa kolu hlobo lwesibonelelo kuyathintela, ngelixa kwilizwe lonke ukukhula kwalo kungathinteleki.
Ummiselo wasebukhosini 900/2015
El Ummiselo wasebukhosini 900/2015 Iphelisa "ukungabikho mthethweni" kwezixhobo zokuzisebenzisa, ichaza iimeko zobuchwephesha nezolawulo ukuze zikwazi ukuwenza ube semthethweni ngendlela ethe ngqo.
Nangona kunjalo, ngokuchanekileyo ezinye zeemeko zolawulo lobuchwephesha, ezinje nge uxanduva lokufaka imitha yesibini kunye nenkqubo ekufuneka yenziwe nenkampani yokuhambisa iyenza inkqubo yokumisela ibize, inzima kakhulu kwaye icothe, ukuthintela nokudimaza amaziko okuzisebenzisa.
Ukuba kuko konke oku sidibanisa irhafu elangeni, eyintlawulo yombane evelisiweyo, ekuphela kwayo ufakelo emakhayeni okanye kwizakhiwo ezinezivumelwano zombane ezingaphantsi kwe-10kW isigaba esinye siyakhululwa okwethutyana, isiphithiphithi siphelele.
Ukongeza, ufakelo olusebenzisa ingqokelela kwiibhetri, ezinje nge Ibhetri Tesla Powerwall 2Ummiselo ubabiza ngeendleko ezizinzileyo ezixhomekeke kumandla, le nto ayibizi kakhulu, kodwa iyabiza kwaye iphazamise nangakumbi izixhobo zombane ezizenzele zona.
Nokuba kunjalo, iindaba ezimnandi zezi Isindululo soMthetho wokuKhuthaza ukuSebenzisa ngokwakho ngoku siqwalaselwa kwiNkomfa yamaSekelaOkwangoku asazi ukuba izakuphumelela na, kuba urhulumente wasivotela esi sicelo. I-Ciudadanos, kwangaxeshanye umququzeleli wesindululo kunye nenkxaso kaRhulumente kwi-veto, ucinga namhlanje ukuba ayigcine i-veto okanye ayiphakamise, kuxhomekeke kuthethathethwano oluqhutywa noMphathiswa Wezemveliso.
Ukuba isindululo siyaqhubeka, baya kususa eyona miqobo mikhulu kuphuhliso lokuzisebenzisa ngokwakho kwilizwe lethu, ukusuka kummiselo we-RD900 / 2015: isidingo ikhawuntari yesibini, inkqubo kunye nomhambisi kunye neentlawulo ezisisigxina neziguquguqukayo, irhafu eyaziwayo yelanga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Umoya ovuselelekayo » I-Tesla Powerwall 2 Ibhetri
Yolanda Guzman sitsho
Imibuliso: Ndifuna ukuthenga ibhetri yeTesla 2 ye-Inverter ye-12KW. Andiqondi ukuba enye yanele okanye kuya kufuneka ndidibanise ezimbini.
Yintoni ukuHanjiswa ePuerto Rico?
Phendula uYolanda Guzmán
Bayguel Baldiviezo sitsho
Inomdla kakhulu .. !!
Phendula uBayguel Baldiviezo
ANTONIO ZAVALA sitsho
KUFUNEKA IBHODI ENYE OKANYE EBANZI KWIMITHANDA EFUNEKAYO YOKUXELWA KWI-12 KW, UNEEPANEL ZESOLAR, OKUJOLISIWEYO UKUSUSA UKUDIBANISWA KWE-CFE KUNYE NOKUSEBENZA NE-PANELS NEEBHETRI UKUBONELELA NGALO MBANE
Phendula ANTONIO ZAVALA
Yintoni amandla e-geothermal, iinkqubo zokumisa umoya kunye nekamva